चितवनमा साउनयता १८५७ मा डेंगु संक्रमण, तीव्र फैलावट जारी, असोजसम्म जोखिम रहने – Health Post Nepal
चितवनमा साउनयता १८५७ मा डेंगु संक्रमण, तीव्र फैलावट जारी, असोजसम्म जोखिम रहने
२०७६ भदौ ३० गते १४:१०
चितवन जिल्लामा डेंगुका बिरामी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा चितवनमा १ हजार ८ सय ५७ जनामा डेंगु संक्रमण भइसकेको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये चितवन जिल्लाका संक्रमित १ हजार ४ सय ९६ जना छन् । नवलपुरका २ सय ३, मकवानपुरका ४१ र अन्य जिल्लाका १ सय १८ जनाले चितवनमा डेंगुको उपचार गराइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका किटनियन्त्रक राम केसीले जानकारी दिए । चितवनमा हालसम्म करिब ६ हजारमा डेंगु परीक्षण गरिएको छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा धेरै भरतपुर महानगरपालिकामा डेंगुका बिरामी भेटिएका छन् । महानगरमा १ हजार ३ सय ३३ जनामा डेंगु देखापरेको केसीले जानकारी दिए । महानगरका १, २, ३ नम्बर वडा बढी प्रभावित देखिएका छन् । त्यस्तै, खैरहनी नगरपालिकामा २०, राप्ती नगरपालिकामा ११, कालिका नगरपालिकामा २१, माडी नगरपालिकामा २५ र इच्छाकामना गाउँपालिकामा १२ जनामा डेंगु देखापरेको छ । एकजना भारतीय नागरिकमा समेत डेंगु संक्रमण भेटिएको छ । संक्रमितको संख्या अझै बढ्न सक्ने स्वास्थ्य कार्यालयको अनुमान छ ।
असोज महिनासम्म डेंगुको प्रकोप कायमै रहने भएकाले सचेत रहन प्रादेश ३ स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रमेश अधिकारीले आह्वान गरे । आइतबार भतरपुरमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा निर्देशक अधिकारीले प्रदेश ३ मा चितवन डेंगुबाट सबैभन्दा प्रभावित बनेकाले प्रदेश सरकारको ध्यान चितवनतर्फ बढेको बताए ।
असोज महिनासम्म डेंगुको प्रकोप कायमै रहने भएकाले सचेत रहन प्रादेश ३ स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रमेश अधिकारीले आह्वान गरे । आइतबार भतरपुरमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा निर्देशक अधिकारीले प्रदेश ३ मा चितवन डेंगुबाट सबैभन्दा प्रभावित बनेकाले प्रदेश सरकारको ध्यान चितवनतर्फ बढेको बताए । उनले डेंगु नियन्त्रणका लागि लाग्न सबै समुदायलाई आग्रहसमेत गरे ।
कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञद्वय लुङदेन, डा. बिएन नग्पाल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक तिवारी, चितवन मेडिकल कलेजका डा. शीतल अधिकारी, डा. दयाराम लम्साल, भरतपुर अस्पतालका डा. युवानिधि बर्सौलालगायतले डेंगु रोगबारे जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा उनीहरुले डेंगु संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने रोग भएकाले घरवरपर पानी जम्न नदिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे ।
हालसम्म भरतपुर अस्पतालमा सबैभन्दा बढी डेंगु संक्रमितले उपचार गराएका छन् । भरतपुरपछि सबैभन्दा बढी डेंगुका बिरामी नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा भेटिएका छन् । त्यसपछि चितवन मेडिकल कलेज, पुरानो मेडिकल कलेजलगायत अस्पतालमा डेंगु संक्रमितले उपचार गराएको पाइएको छ ।
साउनयता डेंगुका कारण चितवनमा २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने एकजनाले स्क्रबटाइफसर र डेंगु दुवैको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
विपद् कोषबाट किट किनेर दिनू : प्रशासन
चितवन जिल्ला विपद्व्यवस्थापन समितिले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई स्थानीय विपद्व्यवस्थापन कोषबाट डेंगु परीक्षण किट खरिद गरी स्थानीय अस्पतालहरूलाई वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले बजेट अभावमा जिल्लामा प्रकोपको रूपमा देखापरेको डेंगुको परीक्षणमै बाधा उत्पन्न भएका कारण त्यसलाई सहज बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
अहिले जिल्लाका सबैजसो क्षेत्रमा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ । तर, हरेक सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थाले किट अभावको समस्या झेलिरहेका छन् । यही अभाव कम गर्न समितिले कोषमा रहेको रकमबाट काम चलाउन भनेको हो । समिति संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपद्कै रूपमा फैलिएको डेंगु संक्रमण नियन्त्रण गर्न आवश्यक निर्णय र प्रयास गर्न भनेको छ ।
स्वास्थ्य विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाले दिएको डेंगु परीक्षण किट साउनको पहिलो सातामै सकिएको थियो । लगत्तै भरतपुर अस्पतालले महानगरपालिकासँग किट सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, महानगरपालिकाले करिब तीन हप्तापछि बिहीबार मात्र एक हजार थान किट उपलब्ध गराएको छ ।
ढिलो गरी महानगरले गर्यो एक हजार किट सहयोग
चितवनमा डेंगुको प्रकोप देखिएको झन्डै एक महिनापछि बल्ल महानगरपालिकाले किट सहयोग गरेको छ । स्वास्थ्य विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाले दिएको डेंगु परीक्षण किट साउनको पहिलो सातामै सकिएको थियो । लगत्तै भरतपुर अस्पतालले महानगरपालिकासँग किट सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, महानगरपालिकाले करिब तीन हप्तापछि बिहीबार मात्र एक हजार थान किट उपलब्ध गराएको छ ।
यसअघि निजी क्षेत्रबाट करिब पाँच सय थान किट अस्पताललाई प्राप्त भएको थियो । ‘महानगरको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सहयोग गरिरहेका छौँ,’ भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीलाई किट हस्तान्तरण गर्दै मेयर रेणु दाहालले भनिन्, ‘किटका लागि गरिएको प्रयास बल्ल सफल भयो ।’ यसअघि पनि डेंगु नियन्त्रणका लागि र्याली, अन्तरक्रियालगायत विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिए पनि महानगरपालिकाले ‘केही गरेन’ भनेर आलोचना गरिएको भन्दै उनले गुनासो गरिन् ।
कार्यक्रममा महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखाका हेल्थ असिस्टेन्स अधिकृत सूर्य तिवारीले डेंगु किटको उपयोग अत्यावश्यक परेको अवस्थामा मात्रै गरिए अभाव नहुने बताए । कार्यक्रममा मेसु तिवारीले भरतपुर अस्पतालमा दैनिक ३ सय किट आवश्यक पर्ने गरेको भन्दै थप सहयोग गर्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका थिए । महानगरले जनस्वास्थ्य शाखाको भइपरी आउँदा प्रयोग गर्न छुट्याइएको रकमबाट दुई लाख र बाँकी अन्य कार्यक्रमबाट एक लाख रूपैयाँ गरी तीन लाख रूपैयाँ मूल्यबराबरको किट अस्पताललाई प्रदान गरेको हो ।